धौलागिरी खबर	 २०७८ श्रावण २७, बुधबार २०:४६ गते मा प्रकाशित 114 0
बेनी । म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघले बेनीको न्युरोडका आगोलागी पिडित ब्यवसायीलाई राहत सहयोग गरेको छ ।
संघको ब्यवसायिक हितकोष, पदाधीकारी, सदस्य र ब्यवसायिहरुबाट संकलन भएको रु. दुई लाख ३९ हजार ५५० रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । मंगलबार बिहान बिद्युत सर्ट भएर आगोलागी हुँदा न्युरोडको नयन स्टोर्स र रघुगंगा डेरी तथा जुस कर्नर जलेर ध्वस्त भएको थियो ।
संघका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवाल र महिला उद्यम बिकास समितिका सभापति लक्ष्मी भण्डारी कार्कीले राहत रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । ब्यवसायीलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अल्पकालिन सहयोग गरिएको र थप राहतका लागि विभिन्न पक्षसँग समन्वय, पहल गरिने संघले जनाएको छ । संघले आगलागीलाई नियन्त्रण गरी थप मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगाउन खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, बेनी र बाग्लुड. नगरपालिका, बजारबासीहरुलाई धन्यवाद ब्यक्त गरेको छ ।